सलमान खान भनेपछि हुरुक्कै हुन्छिन संसारकै सबैभन्दा मोटी महिला... - Kantipath.com
संसारकै सबैभन्दा मोटी मानिएकी इजिप्टकी महिला अहमद अब्दुलतीलाई शल्यक्रियाका लागि भारतको मुम्बई ल्याइएको छ । उनलाई एउटा क्रेनको सहाराले हवाइजहाजबाट उतारियो र एउटा ट्रकमा हालेर मुम्बईको सैफी हस्पिटल पुर्‍याइयो ।
ओछ्यानबाट यताउता हिँडडुल गर्न नसक्ने ५ सय किलोकी इमान हिन्दी फिल्म हेरेर दिन बिताइरहेकी छिन् । उनी बलिउड कलाकारहरुकी फ्यान रहिछन् । तीन खान हिरोहरु -आमिर, शाहरुख र सलमान) लाई मन पराउने उनी सलमान भनेपछि हुरुक्क हुन्छिन् ।
इमानको उपचारमा संलग्न डा. मुजफ्फर लकडावालाले भने, ‘इमानलाई टीवी रिरियल र बलिउड फिल्म खुबै मन पर्दो रहेछ । हामीले उनको कोठाामा एउटा टीवी राखिदिएका छौं । त्यमा कुनै अरेबिक च्यानल नभएर हिन्दी च्यानल मात्रै आउँछ । ती च्यानलमा फिल्म र गीतहरु हेरेर उनी दिन बिताइरहेकी छिन् ।’
इमानलाई हिन्दी गीत पनि खुबै मन पर्दोरहेछ । उनी दंगल र सुल्तानका गीतहरु खुबै सुन्छिन् र गुन्गुनाउँछिन् पनि । यसका अलावा सलमानको फिल्म किकको गीत जुम्मेकी रात उनको फेवरेट गीतमा पर्छ ।
दाहिने हात र खुट्टामा प्यारालाइसिसका कारण इमान हिँडडुल गर्न सक्दिनन् । उनलाई घरबाट ओछ्यानसमेत उठाएर ल्याइएको छ । मुम्बईका डाक्टर मफी लकडावाला र उनको टीमले यी ३६ वषिर्या महिलाको ३ महिनासम्म उपचार गर्नेछन् । उनको रगतको परिक्षण गरिएको छ ।
हस्पिटलमा इमानका लागि विशेष कोठा बनाइएको छ । केही डाक्टरले इमानलाई एलिफेन्टाइसिसको बिरामी बताएका छन् । यसबाट खुट्ट धेरै सुन्निे गर्छ । यो एउटा प्यारासाइटको कारणले हुने गर्छ । डाक्टरका अनुसार इमानको शरीरमा आवश्यकताभन्दा बढि पानी जम्मा भएको छ जसले गर्दा उनको वजन बढ्दै गएको छ ।
सम्बन्धित समाचार :५ सय किलोग्राम तौल भएकी संसारकै सबैभन्दा मोटी महिला
इजिप्टको एलेक्जेन्डि्रयामा बस्ने इमान २५ वर्षदेखि आफ्नो घरबाट बाहिर निस्किन सकेकी थिइनन् । जन्मदा उनको तौल पाँच केजी थियो । उनी कहिल्यै स्कुल गएकी छैनन् ।एजेन्सी
प्रकासित मिति : २०७३ फागुन ३ गते
Previous Previous post: वास्तविक जिवनमै भूतले केटीलाई केटा बनाइदिएपछी …
Next Next post: अनौठो बच्चा : चार खुट्टा र दुईवटा यौनांग, गरियो सफल शल्यक्रिया
बच्चाको तालुमा प्वाल परेपछि
जसपा कार्यकारिणी समिति बैठक बस्दै : महन्थ-राजेन्द्रलाई कारबाही हुन सक्ने !
५५ फिट लामो कपाल भएकी आशा मण्डेला
विश्वकै सबैभन्दा जेठी महिला एमा मोरैनो, १ सय १७ बर्षमा निधन
उडिरहेको विमानमा यौनसम्पर्क ! यात्रुहरु लाजले अर्कोतिर फर्कन बाध्य
१ हजार ६९ ओटा रोबोटहरुले एकसाथ नाचे (भिडियो)
पैसा फल्ने रुख भेटीयो